CISCO ebooks — MYSTERY ZILLION
[FONT=&quot]ကျွန်တော်Networking နဲ့Hardware စာအုပ်များကိုစုစည်းပြီး ကြိုးစားပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် .. နောက်လည်းကျန်ပါသေးတယ်..တစ်ချို့စာအုပ်တွေကတော့ ကျွန်တော့်ဆီမှာရှိနေတာကြာပါပြီ .. တစ်ချို့စာအုပ်များကတော့ .. RS ကနေ အကြိမ်ကြိမ်အခါခါ ပျက်သွားလိုက် ပြန်ဆွဲလိုက်နဲ့ရလာတဲ့ စာအုပ်တွေလည်းပါ..ပါတယ် ..အားလုံးကို စုစည်းပြီးတင်ပေးလိုက်ရင် .. ကျွန်တော့အတွက်တော့ သိပ် အပမ်း မကြီးလှပေမဲ့ .. ဆွဲတွေသူတွေဖက်က မဆွဲနိုင်ဘဲ .. ကိုယ်အပင်ပန်းခံပြီးတင်ပေးထားတာတွေအလကား ဖြစ်မသွားစေချင်လို့ .. တစ်အုပ်ချင်းစီဘဲ .. အများအတွက် အဆင်ပြေစေမယ့် ifile.it မှာဘဲ.. တင်ပေးထားပါတယ်.. နောက်ထပ်တင်စရာတွေရှိပါသေးတယ်...တစ်ချို့စာအုပ်တွေကနည်းနည်းတော့ဆိုဒ်ကြီးပါတယ်..အားလုံးဘဲအဆင်ပြေနိုင်ကြပါစေ..[/FONT]
[FONT=&quot]ဒီတစ်ခေါက်တင်ခဲ့တဲ့ဖိုင်တွေက တစ်ချို့နည်းနည်းဆိုဒ်ကြီးလို့ ကျွန်တော် Rar နဲ့ ဆွဲတဲ့သူဖက်က အလွယ်တကူဆွဲလို့ရအောင် အပိုင်းပိုင်း..ပိုင်း ပြီးမှတင်ထားပါတယ် .. တစ်ချို့ က 15 MB လောက် တစ်ချို့က 20 MB လောက် ရှိတာလောက်ဆိုရင်တော့ မပိုင်းတော့ပါဘူး .. ဒါပေမဲ့တစ်ချို့ စာအုပ်တွေဆိုရင် 75 MB ကနေ 150 -200 MB လောက် ရှိတာ ဆိုရင် တော့..ပိုင်းလိုက်မှ သင့်တော်ပါတယ် .. ဒါမှဆွဲတဲ့သူဖက်ကလည်း အဆင်ပြေ တင်တဲ့သူ ဖက်ကလည်း အဆင်ပြေပါတယ် .. အဲဒီမှာတစ်ခုရှိတာက အဲဒီပိုင်းထားတဲ့ဖိုင်ဆိုရင် .. ပိုင်းထားတဲ့အပိုင်း တွေအားလုံးစုံမှ Suceessfully Extract လုပ်လို့ရပါတယ် မဟုတ်ရင်တော့ Fail Break ဖြစ်ပြီး ဖြည်လို့မရပါဘူး .. ဒီထဲမှာတော့ အများဆုံး 8.57 MB စီလောက် 10 ပိုင်း ပိုင်းထားတာ ပါပါတယ် .. အဲဒီစာအုပ်ကိုဆွဲချင်တယ်ဆိုရင် .. အဲဒီအပိုင်း9ပိုင်းစလုံးကို Download ဆွဲပြီး (ဖိုဒါတစ်ခုတည်းမှာ သီးသန့်ဖြည်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်).. part1 ကိုအရင်ဖြေလိုက်ပါ ကျန်တာတွေကတော့ သူ့ဟာသူ အလိုလိုဖြေသွားပါလိမ့်မယ် .. ပြီးသွားရင် နောက်ဆုံး PDF ဖိုင်တစ်ဖိုင်ထွက်လာပါလိမ့်မယ်..[/FONT]
[FONT=&quot]ကျွန်တော် ဒီတစ်ခေါက်တင်ခဲ့တဲ့ စာအုပ်တွေအားလုံးက web developing လုပ်တာနဲ့ဘဲပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေပါဘဲ…အုပ် 20 ကျော်ပါတယ်.. ဒါကလည်း တောင်းဆိုသူတွေကြောင့်ပါ ဒီအထဲမှာပါတဲ့ တစ်ချို့စာအုပ်တွေက ကျွန်တော် Download ဆွဲထားတာဖြစ်ပြီး တစ်ချို့တွေကတော့ Ebook CD ထဲက ကောင်းနိုးရာရာလေးတွေကို ရွေးပြီးတင်ပေးလိုက်တာပါ.. တစ်ချို့ စာအုပ်တွေက သူတို့ Help ဖိုင်တွေနဲ့ တွဲပြီး ဖတ်ရမှာ ပါပါတယ် .. အဲဒါတွေက ဆိုဒ်အရမ်းကြီးလိ့ု ခဏဖယ်ထားလိုက်ရပါတယ်.. ကျွန်တော်နောက်ထပ်လည်း ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် လက်လှမ်းမှီသမျှတင်ပေးပါဦးမယ် … စာအုပ်တွေတင်တဲ့အခါမှာ တစ်ချို့စာအုပ်တွေက .. ချု့ံလိုက်ရင် သိသိသာသာ ဆိုဒ်ကသေးသွားပေမယ့် .. တစ်ချို့ ပုံတွေအများကြီးပါပြီး resolution များများနဲ့ PDF Print ထားတဲ့ဟာတွေကျတော့ ဘာနဲ့ချုံ့ချုံ့ မူရင်းဆိုဒ်နဲ့သိပ်မကွာပါဘူး … အဲဒါကြောင့် .. တစ်ချို့စာအုပ်ဆိုဒ်တွေက ချုံ့ထားတာတောင် 30 MB ကျော်ပါတယ် … ဒါကလည်း တစ်အုပ်တစ်လေမှပါ.. ထပ်ပြီး ပိုင်းမယ်လို့တော့ စဉ်းစားပါသေးတယ် … Resume ရမဲ့ဆိုဒ်မှာ တင်တာဖြစ်လို့ မပိုင်းလိုက်တော့ပါဘူး…အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ ဆွဲတဲ့သူဖက်က လွယ်လွယ်နဲ့ဆွဲလို့ရစေချင်ပါတယ်.. နောက်ပြီး .. ပြောစရာတစ်ခုက အခုတင်တဲ့ ifile.it ဆိုဒ်ကို တစ်ချို့သူတွေက ဆွဲလို့မရဘူးလို့ပြောပါတယ်.. တစ်ချို့အထာကျပြီးသား သူတွေအတွက် ပြသနာသိပ်မရှိပေမဲ့ … တစ်ချို့သူတွေအတွက် အခက်အခဲရှိချင်တော့ ရှိကြမှာပါ .. တစ်ခါတစ်လေ ကျွန်တော်လည်း ကြုံဖူးပါတယ် .. Varification တွေ ရိုက်ထည့်ပြီးတဲ့အဆင့် Download request ticket ထိကတော့ ဟုတ်နေသေးတယ် … ပြီးတော့ နောက်ဆုံး Download ဆိုတာကြီးကို သွားတော့မှ .. File Address Not found တို့ နောက်ပြီး Connection Interrupt တို့ .. Connection has time Out (လူကြည့်အများဆုံးဆိုဒ်တွေ) တို့ အဲဒါမျိုးတွေပါ .. ဒါက ကွန်နက်ရှင်အရမ်းကျနေရင်လည်း ဖြစ်တတ်တယ် … အဲဒီလိုမျိုးတွေကြုံလာရင် ကျွန်တော် ကတော့ တစ်ခါတစ်လေ ကျော်ပြီး ဆွဲရင်ဆွဲတယ် .. အဲဒါနဲ့အဆင်မပြေရင် … Korea Proxy , Saudi Proxy , အရင် သုံးဖူးတဲ့ ISP ရဲ့ Old Proxy တွေ စသည့်ဖြင့်ပေါ့ ရှိရှိသမျှကို ပြောင်းပြောင်းသုံးပြီး ဆွဲရင်အဆင်ပြေပါတယ်.. ဒါက မသိသေးသူတွေအတွက်ကိုပြောတာပါ.. အဲဒီဆိုဒ်ကလည်း အရမ်းကြီးကောင်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူး .. တစ်ခြားဆိုဒ်တွေလိုပါဘဲ … တစ်ခါတစ်လေ တင်နေရင်း Unfortunately ဆိုပြီး ပြုတ်ကျတဲ့အခါလည်းအများကြီးပါဘဲ ..ဒါပေမဲ့ ကောင်းတယ်လို့ဘဲပြောရမှာပါ … သူကတင်တဲ့အခါမှာ Progress rate တွေပုံမှန်ပြပြီး … corrupt ဖြစ်တာနည်းပါတယ်.. ကွန်နက်ရှင် လုံး၀ အဆင်မပြေရင်တော့ မရဘူးပေါ့.. တစ်ခြားဆိုဒ်တွေတင်ပြန်ရင်လည်း … ကိုယ်ဖက်ကတော့ တင်ပေးတာကကိစ္စမရှိ ပေမဲ့ .. ဆွဲတဲ့သူတွေဖက်က .. ပိတ်ထားတာ နဲ့သွားတိုးရင်လည်း ဆွဲတဲ့သူတွေက တစ်ကူးတစ်က ဘယ်ဆွဲတော့မှာလဲ .. ဒါကလည်း ရှိသေးတာကိုး .. အဲဒါကြောင့် တင်ရင်းနဲ့ အဲဒီမှာဘဲဆက်တင် နေရတာပါ … အိုကေ .. အဆင်ပြေပြေဆွဲနိုင်ကြပါစေဗျာ.. ကျွန်တော်နောက်တစ်ခေါက်တင်မဲ့ …. စာအုပ်တွေက Windows Server နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စာအုပ်တွေချည်း သက်သက် တင်မယ်လို့တော့ စိတ်ကူးထားပါတယ်… 2000 , NT , 2003 တို့တော့ပါလာမှာပါ… ကျေးဇူးတင်ပါတယ်…[/FONT]